Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo xilligan ka qeyb galaya shir ka socda Garoonka diyaaradaha (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 10 November 2014 10 November 2014
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Qaramada Midoobey, Midowga Yurub iyo Mas’uuliyiin ka socota Maamul goboleedyada ayaa shirkan si wada jir ah uga qeyb galaya.
Shirkan oo saddexdii bil mar la qabto ayaa looga hadlayaa waxyaabihii u qabsoomay dowladda iyo arrimaha Hiigsiga cusub (New Deal), waxaana la filayaa in madaxda dowladda ay khudbado ka jeediyaan.
Qabsoomida shirkan ayaa ku soo aaday, iyadoo uu khilaaf xoogan u dhaxeeyo Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, kaasoo saameeyay dhamaan hey’adaha dowladda.
Waxaa la filayaa in shirka looga hadlo arrimaha kala aragti duwanaanshaha Madaxda dowladda iyo in laga yaabo in saameyn ku yeesho arrimaha hiigsiga cusub.
Nabadsugidda oo xalay hub ka qabatay degmada Wadajir
Madaxda dowladda oo isku raacay in la hakiyo shirka Baydhabo